Barzakh Recovery soo celinta Data
Sida loo soo celiya Xogta laga masaxay ah Barzakh,
> Resource > Ladnaansho > Sidee soo celinta Xogta laga masaxay ah Barzakh,
Waa maxay partitioning?
Partitioning waa in ay kala qaybiyaan kaydinta mass (tusaale ahaan, disk adag) qaybo go'doonsan, iyo qayb kasta waxaa ah xijaab, sida / D C / E / F drive. Guud ahaan, C drive waxaa ah xijaab nidaamka halka aan ku rakibi ka hawlgala nidaamyada. Partitioning si gaar ah faa'iido haddii aynu wax ka badan hal nidaamka qalliinka. Tusaale ahaan, waxaad qoondeeyo laga yaabaa in mid ka mid ah xijaab u Windows XP iyo kale Windows 7.
Sida loo soo celiyo xijaab?
" Shalay waxaan ku rakibidda ahaa Windows XP ku adag drive cusub (desktop). My computer waxa uu la xidhiidhay 2 drives adag dibadda. Inta lagu guda jiro habka loo xirxiro waxay igu dhalisay in aan gali drive ee rakibo. Haddii aan la ogaaday waxaan si qalad ah la tirtiro xijaab drive dibadda adag ee . Haddaba markaan ku xidhi aan HDD dibadda si aan Laptop, waxa uu muujinayaa oo kaliya drive, oo markii aan guji ku yaal, waxaa soo ridaysaa in aan qaab oo waxaan u baajiso. suroobi karaa waddo waxaan kartaa celin xijaab iyo xogta aan ? "
Jawaabtu waa HAA. Markaas sababta aad u soo celin karto xijaab iyo xogta?
Waxay ku xiran tahay qaybta miiska xijaab iyo kabaha in haddii xijaab waxaa laga garan karaa habka ama aan. Haddii waaxda / boot miiska xijaab waa la tirtiray ama burburiyey virus, Risaalo ka noqon doono aan la arki karin, in si kale loo dhigo, waxaad u malaynaysaa in aad ku tirtiray Risaalo ka badiyay xogta ku hadlo xijaab in la tirtiro. Laakiin dhab ahaantii, xogta waxaa hadhay, oo waxay la mid yihiin geli karin, sidaas darteed in aadan ka heli kartaa iyaga oo ku My Computer. Barzakh Khasaaray Recovery module ee Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac , baari karaa disk oo dhan adag oo lagu ogaan Risaalo ka tirtiray , in ka dib markii aad karto soo kabsado xijaab tirtiray iyo dib xog muhiim ah aad.
Waa ammaan inaad soo kabsado xijaab lumay dhex kabsaday miiska xijaab ama boot qaybta, taas oo macnaheedu yahay software marnaba isku dayi doonta in ay qoraan xogta ku saabsan Risaalo oo aad rabto in aad soo celiyo.
Halkan aynu qaadan version Windows sida tusaale inuu ka soo kabsado xogta laga hadlo xijaab tirtiray ama laga badiyay. Fadlan raac tallaabo hage talaabo ah.
Burcad Wondershare Data Recovery. Tag ah "Standard Mode" oo xulo "Recovery ah Barzakh," on interface ugu weyn.
Tallaabada 1. Dooro drive jirka in xijaab tirtiray ama laga badiyay ku yaal, ka dibna riix "Next".
Tallaabada 2. Dooro Risaalo oo guji "bilow"
Oo dhan qoruhu tirtiray, formatted badiyay la soo daabici doonaa. Dooro mid oo ka bilaaban iskaanka. Dooro Risaalo meesha xogta aad laga badiyay ku yaal.
Markii ugu scan ku xiran tahay oo dib u soo kabashada hab la doorto. Skaanka qaadan kartaa dhawr daqiiqo ee Recovery ee File Lost, ama ilaa saacad ama labo saacadood ee soo kabashada File ceeriin Waad joojin kartaa ama yara scan ee dhexe ee habka. Waxaad kala dooran kartaa in ay ku kaydiso natiijada scan hore u soo kabashada xog joogto ah mar kasta oo aan mar kale ka baareyso. Si aad natiijo wanaagsan, waxaa idinku waajib ah in ay u oggolaadaan scan ku dhammayn.
Tallaabada 3. Raadi faylasha aad rabto
Raadi xog diirada taas oo aad rabto inuu ka soo kabsado ah. Riix 'Ladnaansho' inay galaan caga interface doorashada. Ama guji Back inuu ku soo laabto interface doorashada Risaalo.
Waxaad ku eegaan kartaa sawirada, waraaqaha, iyo archives ka hor soo kabashada.
Natiijada scan ayaa la soo daabici doonaa magaca la asalka iyo waddada, halka files u Recovery File ceeriin la soo daabici doonaa sida ay qaabab file.
Faylal ay kala tagi karo magac, size, Abuuray iyo modified taariikhda.
Waxaad isticmaali kartaa file filter si ay u baadhaan faylasha gaar ah si hufan oo deg deg ah.
Tallaabada 4. Dooro meel u socoto si loo badbaadiyo xogta recoverable ah
Dooro ama geli tusaha si loo badbaadiyo files soo kabsaday.
Waxaan aad ugu talinaynaa inaad doorato buugga kale oo ka duwan isha mid, maxaa yeelay, cabsidoodii in overwrite lahaa xog isha ugu danbeyn.
Video tutorial ah tirtiray / badiyay kabashada xijaab
Sidee inuu ka soo kabsado Data ka ah Barzakh, formatted
Sidee inuu ka soo kabsado qoruhu ku Vista
Wondershare Dr.Fone ee macruufka
Xalka buuxa inuu ka soo kabsado xiriir la tirtiro, fariimaha, sawiro, qoraalo, iwm ka iPhone, iPad iyo iPod taabto.
NTFS Drive Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga NTFS digsi
Recovery Qaabka Quick: Sidee inuu ka soo kabsado ka dib markii Files Qaabka Quick
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Recycle Bin
Top Software 5 Photo Recovery for Windows iyo Mac
Sida loo Recently Ladnaansho tirtiray Files
Recovery Image GIF: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray GIF Image
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga exFAT Drive
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Computer
Kabsado Khasaaray ama la tirtiro MMC Files in 3 Talaabooyinka
Recovery File Mpg